Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ (စာမျက်နှာ 2)
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကြွေပြားများအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှကိုပြောပြပါမည်။ ဒီ photovoltaic နည်းပညာ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အားသာချက်များကိုလေ့လာရန်ဒီနေရာကိုဝင်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာနေရောင်ခြည်ဥယျာဉ်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်။ ထို့အပြင်၊ ဤစွမ်းအင်အမျိုးအစားမှရရှိသောအားသာချက်များအားလုံးကိုသင်သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။
Photovoltaic အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာရန်ဤနေရာတွင်ဝင်ရောက်ပါ။ ဆိုလာပြားများသည်အစမှမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာပါ။
၎င်းသည်ဘာလဲ၊ မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်နှင့် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသနည်း
ဒီ post မှာ photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုထုတ်လွှတ်တယ်၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုပြောထားတယ်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်လေ့လာလိုပါသလား။
ရေပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်များမှရရှိသောစွမ်းအင်ထက် ၁၅% ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတိုင်းပြည်၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။
အဆိုပါ photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စန်းစပိန်အတွက်ပြန်လည်ရောက်ရှိ
လူကြိုက်များသောပါတီ၏ဖြတ်တောက်မှုကြောင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသက်တမ်းနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအထူးသဖြင့် photovoltaics တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပြန်လာနေပုံရသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အနာဂတ်အတွက်အလားအလာများကားအဘယ်နည်း။
၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအကြီးစားလေလံ ၃ ခုမှတစ်ဆင့်စပိန်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲထုတ်လုပ်နိုင်မှု၏ ၂၀% သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
Pamplona သည်စွမ်းအင်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုသုံးစွဲမှု၊ စွမ်းအင်တိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းအင်စုဆောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ယူရိုတစ်သန်းနီးပါးကိုရည်စူးထားသည်။ မင်းရဲ့တိုင်းတာမှုကဘာလဲ၊
အကယ်၍ နိုင်ငံရေးက၎င်းကိုမပျက်စီးစေပါကချီလီသည်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကိုဖျက်သိမ်းတော့မည်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၎င်း၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုနှစ်ဆတိုးစေခဲ့သည်။ စွမ်းအင်သည်မည်သည့်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်ကိုသင်မည်သို့မြင်သနည်း။
လောလောဆယ်စပိန်နိုင်ငံတွင်မူပေါ်တူဂီကဲ့သို့သောအခြားဥရောပနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၇% ကိုသာရောက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်ပြည်နယ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလေလံ ၃ ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီများသည်ကောင်းစွာတုံ့ပြန်လျက်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရထားကိုအသုံးပြုလိုကြသည်။
သင်ယူမှုမျဉ်းကွေးအားဖြင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏ကုန်ကျစရိတ်များကျဆင်းသွားပြီးကျဆင်းခြင်းထက်ပိုမိုသည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အားလုံးသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဟု IRENA မှအာမခံသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်မိမိ၏ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအခွန်စည်းကြပ်သည့်အခွန်များမပါဘဲကိုယ်တိုင် ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် Ecocat ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။ သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိလိုပါသလား။
မိုးရွာသွန်းမှုနည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျောက်မီးသွေးနှင့်ဓာတ်ငွေ့အသုံးပြုမှုမှာတိုးပွားလာသည်။ ကျောက်မီးသွေးအသုံးပြုမှုရာခိုင်နှုန်းမှာအဘယ်နည်း။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုရာခိုင်နှုန်းမည်သည်နည်း။ အနာဂတ်တွင်တိုးပွားလာမည်လားအရင်းအမြစ်များဘယ်မှာလဲ။ နိုင်ငံထဲမှာ?
များစွာသောလေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများသို့မဟုတ် photovoltaic တပ်ဆင်မှုများသည် Aragon တွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ ဤကဏ္inတွင်အရေးအကြီးဆုံးသော Aragonese ကုမ္ပဏီသည်မည်သည့်ကဏ္ the ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်မက္ကဆီကိုရှိအပင်များတွင် Enel သည်ကမ္ဘာ့အသက်သာဆုံးစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုမည်နည်း။ ၎င်းသည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်နည်း။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များကြောင့် Albacete သည်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ထိပ်ဆုံး ၁ တွင်ရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးစွမ်းအင်ကဘာလဲစပိန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပန်းခြံကဘာလဲ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်လေစွမ်းအင်သည် ၆၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်တပ်ဆင်ထားသော AREH စီမံကိန်းကိုမွေးဖွားရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။
တက်စလာသည် Puerto Rico ရှိကလေးဆေးရုံသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့ပေးသည်
တက်စလာသည်စက်တင်ဘာလတွင်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ၂ ခုဖြစ်ပွားပြီးနောက် Puerto Rico ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်ကူညီသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားဘယ်မှာတပ်ဆင်ထားသလဲ
လေ့လာမှုတစ်ခုအရအနက်ရောင်လိပ်ပြာများ၏အတောင်များသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များကို ၂၀၀% အထိတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒီကနေ့ဒီ Airec 2017 ညီလာခံကိုဒီကဏ္sectorမှာအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားမှာကျင်းပနေတယ်။ မင်းရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုရှိမလဲ။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲကမ္ဘာတွင်အသစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် 8000 ဘီလီယံ
စွမ်းအင် 8GW အတွက်ယူရို ၈ ဘီလျံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီများအကျိုးခံစားခဲ့ရသနည်း။
ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်စပိန်ဆန့်ကျင်ခုံသမာဓိ 30 ကျော်ပြီးသားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသာသူတို့ကိုသွားနိုင်ပါတယ်ရလဒ်ကိုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ရှက်စရာ၏အခွန်, ကျနော်တို့နေရောင်အပေါ်အခွန်ရှိရာတစ်ခုတည်းသောတိုင်းပြည်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီထဲမှာဘာတွေပါဝင်သလဲ။ မင်းတို့ကိုဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲ၊ မင်းဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာငါတို့ပြောတယ်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်လေလံပွဲတွင်မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သည်။ 8 GW ကျော်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်၊ ၎င်းသည်ရေတိုတွင်ကဏ္ sector ၏ပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည်သြစတြေးလျတွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏စွမ်းအင်သည်မည်သည်တို့ဖြစ်မည်နည်း။ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
၎င်းတို့သည် insolation နည်းပါးသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများတီထွင်ထုတ်လုပ်သည်
ရွှံ့နွံများတွင်ရေမရှိခြင်းသည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ပထမနှစ်ဝက်တွင်ကဏ္ half သည် ၁၇.၂ သန်းထပ်မံထုတ်လွှင့်သည်။
ကဏ္ sector အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုးရွားလှသည့်နှစ်အကြာတွင်၎င်းတို့သည်ဥရောပ၏ရည်မှန်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပြီးခဲ့သည့်လေလံ ၃ ခုနှင့်အတူအလင်းကိုမြင်ခဲ့ရပုံရသည်။
Canary Islands FDCAN မှတစ်ဆင့်ကျွန်းပေါင်းများစွာတွင်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်စေရန်စီမံကိန်း ၉၀ ခန့်သည်ယူရို ၂၂၈ သန်းရန်ပုံငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံအားလုံးသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့် ၄ ရက်ကြာလည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသာဤမျှကာလပတ်လုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၌လေ၊ geothermal၊ ရေအားလျှပ်စစ်၊ နေနှင့်အပူကဲ့သို့သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားအများဆုံးရှိသည်။
ACS သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်လေလံပွဲ၏အောင်မြင်သူဖြစ်သည်။ photovoltaic ၏ 1550MW ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ Forestalia နှင့် Enel တို့သည်ကိတ်မုန့်ကိုသူတို့ဝေမျှကြသည်
လေလံပွဲသည်မေလတွင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောခွဲဝေချထားပေးခြင်းနှင့် photovoltaic မြှင့်တင်သူများကအပြင်းအထန်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
REN21 အဖွဲ့မှတင်ပြသောနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုမတားဆီးနိုင်သောတိုးတက်မှု၊ ၎င်းတို့၏အလားအလာကောင်းသောလက်ရှိနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုပြသသည်။
အစိုးရသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်အမြတ်အစွန်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းကို ၁၀% အထိလျှော့ချရန်ပရီမီယံများကိုလျှော့ချလိုသည်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စျေးနှုန်းများသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic စွမ်းအင်တပ်ဆင်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏စျေးနှုန်းများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိဆက်လက်ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ solar သည်နေစွမ်းအင်၏ ၂၅% ကိုစုစည်းထားသည်
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းကဏ္ sectors သည် photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ၂၅% ကိုကိုယ်တိုင်စားသုံးရန်အတွက်စုစည်းထားသည်
နောက်ထပ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်လေလံပွဲကိုဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်
ပြီးခဲ့သည့်လေလံအောင်မြင်မှုအပြီးတွင်အစိုးရကဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်တွင်နောက်ထပ် 3000MW ထပ်မံကြေညာခဲ့သည်။ ယခင်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုလောင်းကစားခြင်း၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ဤကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းသည်။
အစိုးရသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းလိမ့်မည်
အစိုးရအနေဖြင့်လက်ရှိ 'ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအမြတ်အစွန်း' ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဆန္ဒရှိသည်မဟုတ်ပါ၊
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည်ဂျာမနီတွင်အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၄၀၀၀၀၀ နီးပါးဖန်တီးပေးသည်
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များသည်အလုပ်အကိုင်များစွာကိုဖန်တီးပေးသည်။ ဤကဏ္ sector သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံနှင့်ကျောက်မီးသွေးတို့ထက်လူအများအပြားကိုအလုပ်ခန့်ထားသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်တွင်ဆိုလာစွမ်းအင်သည်အကုန်အကျအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
စွမ်းအင် ၀ န်ကြီးဌာန၊ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာနသည်လေလံပွဲတစ်ခုကိုတင်ဆက်လိုက်သည်။ လေလံဆွဲမှုအသစ်သည်မဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀၀ ရှိမည်ဖြစ်ပြီးလေနှင့်ဓာတ်ပုံစွမ်းအင်သုံးစွဲရန်ရည်ရွယ်သည်။
Dewa သည် Mohammed bin Rashid CSP ၏ ၂၀၀ မဂ္ဂါဝပ်၏စတုတ္ထအဆင့်ကိုရွေးချယ်သောလုပ်ငန်းစုများ၏ ၁၀cts အောက်တွင်ရှိသည်။
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် 3GW ၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးလေလံပွဲကိုထိန်းညှိရန်အတွက် CNMC ကိုမူကြမ်းအားပေးပို့ခဲ့ပြီး၎င်းကိုစနစ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မပေးဘဲပိတ်ထားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဂျာမန်အုပ်စု Juwi ၏ဘဏ္capacityာရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် CNMC သည် Mula photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ megaproject စီမံကိန်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Forestalia သည်ပြီးခဲ့သည့်မေလကအစိုးရကပြုလုပ်ခဲ့သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးလေလံတင်ရောင်းချမှုတွင်ကမ်းလှမ်းထားသော ၃၀၀၀ အနက်မှမဂ္ဂါဝပ် ၁,၂၀၀ ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ကုန်ကတည်းကစပိန်နိုင်ငံတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ သက်ရောက်စေသည့်ဥပဒေပြုရေးအစီအမံများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှ၎င်းတို့လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်ကိုကုမ္ပဏီများကပိုပိုပြီးများပြားလာသည်။ Iberdrola သည် Apple, Amazon, Nike တို့ကိုအခြားသူများအကြားစွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပေးသည်
ICSID ရှိပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြတ်တောက်မှုအတွက်ဆိုင်းငံ့ထားတရားစွဲမှု ၃၀ နီးပါး
စပိန်နိုင်ငံသည် ICSID ကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှအနည်းဆုံး ၂၇ ခုတိုင်ကြားချက်များကိုစုဆောင်းထားသည်။ စုစုပေါင်းယူရို ၃,၅၀၀ သည် ၆၀၀၀ အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
Rajoy သည်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သောလေလံအသစ် ၃၀၀၀ ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Mariano Rajoy ကသူသည်မဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀၀ အတွက်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်လေလံအသစ်တစ်ခုစတင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစတင်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
လေစွမ်းအင်ကလေလံဆွဲလိုက်ပြီးအောင်မြင်သူအားလုံးအမြင့်ဆုံးလျှော့စျေးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Enel (၅၀၀MW) သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (၆၅၀ မဂ္ဂါဝပ်)၊ Gamesa (500MW) နှင့် Forestalia (650MW)
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များမှရရှိသောအရာများကိုတိုင်းတာရန်အတွက်နိုင်ငံတကာစွမ်းအင်အေဂျင်စီသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏ချိန်ခွင်လျှာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအတွက်အကူအညီအတွက် 2010 ခုနှစ်မှလျှောက်ထားဖြတ်တောက်မှုကြောင့်စပိန်, ICSID မတိုင်မီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိ၏ပထမ ဦး ဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်
ဒူဘိုင်းတွင်သဲကန္တာရ၌နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသစ်တပ်ဆင်ထားသည် ထိုဥယျာဉ်ကို Mohammed Bin Rashid, TSK မှတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
graphene ဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်အသစ်တီထွင်မှုကြောင့်မိုးရေများဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အတွက်အောင်မြင်မှု။
အစိုးရသည် BOE တွင် Renovables de Sevilla SL အား 110MW photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတပ်ဆင်မှု Guillena ကိုခွင့်ပြုကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏အနာဂတ်။
လေလံပွဲတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနည်းပညာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းသည် ၀ န်ကြီးဌာန၏ကြီးမားသောအမှားဖြစ်သည်
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအသင်း - APPA သည်မိုးရွာမှု၊ သဘောတူညီမှုမရှိခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲလေလံဆွဲရန်စီစဉ်ခြင်းမရှိခြင်းကိုရှုတ်ချသည်။
တစ်ပတ်ရစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများကို ၀ ယ်ယူသင့်ပါသလား။
လက်တင်အမေရိကရှိ Photovoltaic စန်း
ယခုဆယ်စုနှစ်အစတွင် photovoltaic တပ်ဆင်ထားမှုများမရှိခြင်းမှသည် ၄၀ GW ကျော်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ခန့်မှန်းချက်များအထိ၎င်း၏အဆုံး၌တပ်ဆင်ထားသည်။
အစိုးရသည်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်လေလံပွဲ၏“ ပရီမီယံ” များကိုလျှော့ချသည်
၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လာမည့်လေလံပွဲတွင်အောင်မြင်သူများအတွက်အများဆုံးအကူအညီပမာဏကိုလျှော့ချလိုက်သည်။ လေတိုက်ရာ၌ 11% နှင့် photovoltaic အတွက် 22%
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလေလံပွဲကိုဆိုင်းငံ့ထားရန် UNEF က TS အားတောင်းဆိုခဲ့သည်
နောက်ထပ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလေလံပွဲကိုရပ်ဆိုင်းရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန် UNEF က TS အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကလေစွမ်းအင်ကိုမျက်နှာသာကတည်းက
photovoltaics အတွက်အသစ်သောမှတ်တိုင်များ, အသစ်သောအဆောက်အ ဦ များ, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အနာဂတ်အသစ်သောခေတ်ရေစီးကြောင်း, ဂျာမနီအတွက် Intersolar တရားမျှတသော။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲစေမည့်တိုးတက်မှုများ (Floating Solar Panels နှင့် Solar Tinta)
နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကနေနှင့်လေတို့ကိုပိုမိုအသုံးချရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့အကြံပြုချက်များ။ အနာဂတ်အတွက်
Photovoltaic စွမ်းအင်ကိုငှားရန်ဂျာမနီကအိမ်ပေါင်း ၃.၈ သန်းကိုငှားရန်ဖြစ်သည်
photovoltaic နှင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှု၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပုံစံအသစ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု၊ ပြည်တွင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစုဆောင်းခြင်း၊ လီသီယမ် - ဘက်ထရီ
Deza စူပါမားကတ်တွင် ၃၂.၄ kW ဖိုဗို့အားတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်သင်၏လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု၏ ၁၅% ကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။
Yoshikawa သည် ၂၆% စွမ်းအားထက်ကျော်လွန်သောပထမဆုံး photovoltaic panel ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးနေကိုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၂၈% သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းရှိသည်
မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေအကြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်စိုးရိမ်မှုများတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် Evolution ။ နယူးလေတိုက်နှုန်း
photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲ၊ ဘယ်ကဏ္sectorsတွေမှာအသုံးပြုသလဲ။ ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်၊ အနာဂတ်ဘယ်လိုရှိမလဲ။ ဘယ်ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းသလဲ။
ကမ္ဘာကြီးသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ လမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်မီးရထားများကို photovoltaic နေရောင်ခေါင်မိုးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းသည်ယခုအခါရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
III Solar Forum ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အနာဂတ်။ ရာသီဥတုလှုပ်ရှားမှုနှင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာဥရောပကော်မရှင်နာ၏ဖော်ပြချက် Miguel Arias Cañete
Wattway စီမံကိန်းသည်ပြင်သစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောပထမဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းဖြစ်ပြီးယူရို ၅ သန်းကုန်ကျပြီးနောက်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူ။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းသစ်များ
ထောင်နှင့်ချီသောပြည်သူများကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက် photovoltaic ပြားတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့သည်ရေလှောင်ကန်များကိုအသုံးပြုသည်
ကျူးဘားသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်ဆိုလာပန်းခြံ ၅၉ ခုကိုတည်ဆောက်သည်
ကျူးဘားသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပန်းခြံ ၅၉ ခုကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏ ၂၄% ကိုရရှိရန်ရည်မှန်းချက်တွင်ပါဝင်လိုသည်။
Betancuria (Fuerteventura) တွင်ရှိသောစိုက်ခင်းတစ်ခုသည်ကိုယ်ပိုင်လုံလောက်သောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုသာရက်သတ္တပတ်များစွာအသုံးပြုနေပြီးဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ sector သည်ရန်ပုံငွေနည်းပါးခြင်းကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်သော်လည်းအချို့သောစီမံကိန်းများကသူတို့၏တီထွင်မှုကြောင့်၎င်းကိုရရှိကြသည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်အသစ်များသည်အဆောက်အ ဦး များ၏စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်
ဘာစီလိုနာသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပိုင်အဆောက်အအုံများမှထုတ်လုပ်သောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုဝယ်ယူရောင်းချမည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
Tilos သည်မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်တည်ရှိပြီး Horizonte Tilos စီမံကိန်းကြောင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်သာပထမဆုံးအကြိမ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည်
Transparent Photovoltaic Solar Cells
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ WYSIPS ၏မီဒီယာပုံသဏ္withာန်အရဆိုလျှင်အသုံးချခြင်း၊ နေရောင်ခြည်သုံးခြင်းအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဆဲလ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကြားရသည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်
သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အရဆိုလာစွမ်းအင်သည် ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းအလွန်လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေသည်။
နှစ်အတန်ကြာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင်ဆိုလာလ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစုဆောင်းသူသည်စီးပွားဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်ဗိသုကာတစ် ဦး တီထွင်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်ရေနှင့်ပြည့်သောရေနှင့်ပြည့်စုံသောစွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဂန္ထဝင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစွမ်းအင်ထက် ၇၀% ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
ဒီနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပူဖောင်းကိုထုတ်ပေးတဲ့ရိုးရာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစွမ်းအင်ထက်အဆ ၄၀၀ ပိုပိုပါတယ်
ဤရွေ့ကားနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပူဖောင်းများကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဖြတ်ပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်။ ကြီးစွာသောပြောင်းလဲမှု၏ propellants ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
SolarCity သည်လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်ကဆိုလျှင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးထိရောက်စွာကြေငြာခဲ့သည်။
၃၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတိုးတက်လာသည့်ပမာဏဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သမားရိုးကျနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြား၏နှစ်ဆဖြစ်သည်
ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်သင်္ဘော၏ရွက်လွှင့်စက်များတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး 1 kW ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော photovoltaic ဆဲလ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
နေရောင်ကာများနှင့်အတူတစ် ဦး ကယာဉ်ရပ်နားအများကြီးကြီးစွာသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်
မြို့တစ်မြို့တွင်ကားရပ်နားရန်နေရာများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်နေကာဖုံးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါကအားသာချက်များစွာရှိသည်
PlanetSolar သည် ၁၀၀% နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့်အသုံးပြုသောလှေဖြစ်သည်
PlanetSolar သည် ၁၀၀% နေစွမ်းအင် မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမှမောင်းနှင်သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့မသွားပါ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ Sheffield တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများသည် aerosol ဆေးများကဲ့သို့သုံးနိုင်သည့် photovoltaic ဆဲလ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
Self-adhesive photovoltaic panel များ၊ တော်လှန်ရေးအသစ်
Stanford တက္ကသိုလ်သုတေသနအဖွဲ့မှတီထွင်ခဲ့သော Self-adhesive ဆိုလာပြားများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါး
စွန့်ပစ်ရေကိုသန့်စင်ရန်အတွက်Almeríaတက္ကသိုလ်တွင်တည်ဆောက်နေသောစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါး။
ကျေးလက်ဒေသရှိကျောင်းများအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစီမံကိန်းများကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတီထွင်နေကြသည်။ ဤစီမံကိန်းများအနက်တစ်ခုမှာကျေးလက်ကျောင်းများတည်ရှိသည့်ဗဲလပ်စ်၌အဆုံးသတ်သွားသည်
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသော Acciona, ရွက်လှေ
အထည်များရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအကောင်းဆုံးစီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
၎င်းကို Malaga, ခြံတွင်စိုက်ထူပြီး၎င်းတွင်ဖန်သားကြွေပြားခေါင်မိုးရှိသည်။
လတ္တီတွဒ် + ၃၅ ရှိသည့်အီကွေဒေါနိုင်ငံကိုနေလောင်ဒေသများဟုခေါ်သည်။
photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တပ်ဆင်နှင့်အတူလူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး module တွေသို့မဟုတ်ပြားများပြန်လည်အသုံးပြု
မည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆိုကဲ့သို့ photovoltaic ဆိုလာပြားများသည်အသုံး ၀ င်သောကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ဘဝသံသရာပျမ်းမျှအားရှိပါတယ် ...
နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစျေးကွက်တွင်တင်ဆက်နေပါသည်။